လေနုအေး: သစ္စာတရားတို့ ဖြင့်…
Groom: “ I, take you, to be my wife. I promise to be true to you in good times and in bad, in sickness and in health. I will love you and honour you all the days of my life. “
Bride:” I, take you, to be my husband. I promise to be true to you in good times and in bad, in sickness and in health. I will love you and honour you all the days of my life. “
“အဲဒီစကားလုံးတွေက လက်တွေ့ မဆန်လိုက်တာ… သတို့ သမီး မျက်ဝန်းထဲကို ခုကြင်ကြင်နာနာ စိုက်ကြည့်နေတဲ့ သတို့ သားအကြည့်တွေ တနှစ်တောင် ခံပါ့မလားမသိ…ဟိဟိ”
“အေးလေ… နာဖျားသည်ဖြစ်စေတဲ့… ဘယ်ယောင်္ကျားမှ နာဖျားနေတဲ့ နာတာရှည်မိန်းမကို စိတ်ရှည်လက်ရှည်ပြုစုမှာ မဟုတ်ဘူး… လူရှေ့ သူ့ ရှေ့လူကြားကောင်းအောင်သာ လုပ်ပြမယ်… ကွယ်ရာကျတော့ ကျန်းမာနုပျိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ နေမှာ”
သတို့ သမီးလေးနဲ့ သတို့ သားလေးတို့ ရဲ့ မင်္ဂလာအရှိဆိုး မင်္ဂလာကတိက၀တ်တွေ တယောက်နဲ့ တယောက်ပေးနေကြတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်မဘေးက ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ တီးတိုးပြောဆိုသံတွေကြောင့် ကြည်နူးနေတဲ့ စိတ်ကလေးတွေ ပျောက်သွားတယ်…။ သူတို့ ရှိလှမှ အသက်၂၀ ၀န်းကျင်ပေ့ါ…။ နှစ်ယောက်လုံး ရင်ညွှတ်လေးတွေ မြင်ရအောင် လည်ဟိုက်နေတဲ့အကျီင်္လေးတွေနဲ့ … ပြီးတော့ပေါင်တံသွယ်သွယ်လေးတွေ မြင်နေရအောင် တိုတဲ့စကပ်လေးတွေနဲ့ …။ အဲဒီလောက် နုနယ်တဲ့နှလုံးသားလေးတွေမှာ ဘာကြောင့် ဒီအရုပ်ဆိုးတဲ့ အမြင်တွေ ရှိနေပါလိမ့်…။
“ဟယ်…. ခုမှရှင့်အိတ်လေးတွေ့ တယ်တော့… chanel လေး… အရင်က မတွေ့ ပါဘူး… မဟုတ်မှလွဲရော ဦးဝယ်ပေးထားတာပဲ ဖြစ်ရမယ်”
“အဟုတ်ပေါ့… သိတယ်မိုလား… chanel တအိတ်လောက်ကတော့ တခါချွဲပဲ… ဟိုတလောက စင်္ကာပူလိုက်သွားတုန်းက ၀ယ်ပေးတာလေ ”
“အေး…နင်လိုက်သွားတာ ပိုးပြောလို့ သိလိုက်တယ်… သူ့ မိန်းမကြီးက လေဆိပ်ထိလိုက်ပို့ တာဆို”
“အေးလေ… ပါတိတ်ဝမ်းဆက်ကြီးနဲ့ ရုပ်ကြမ်းကြီးနဲ့သူ့ ယောင်္ကျားကို မှာနေလိုက်တာ မပြီးဘူး… အသွားလေယဉ်ပေါ်ကနေ… အပြန်လေယဉ်ပေါ်ထိ အရမ်းကဲတဲ့ သူ့ ယောင်္ကျားကို ဗွီဒီယိုရိုက်ပြီးသာ ပြလိုက်ချင်တယ်.. ”
“နင်… ဦးကို ယူမှာလား”
“ယူမှာပေါ့ဟ… ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်စရာမလိုပဲ လှလှပပလေးပြင် ထိုင်ချွဲပေးနေရုံနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာ နေချင်သလိုနေရတာ… ၀တ်ချင်သလိုဝတ်ရတာ… ဒါမျိုးအလွတ်ခံရင် ငါမိုက်ရာကျမှာပေါ့”
“သူ့ သမီးလေးတောင် နင့်ထက်တနှစ်ပဲငယ်တာမိုလား… အငယ်ဆုံးသားလေးက နင့်မောင်လေးနဲ့ ရွယ်တူဆို… အဲဒီမိသားစုကို နင်ထည့်မစဉ်းစားဘူးပေါ့”
“None of my business ပါဟာ… သူတောင် သူ့ မိသားစုမစဉ်းစားတာ ငါက ဘာလို့ စဉ်းစားနေမှာလဲ… ယူကိုယူပြဦးမှာ… တကယ်လို့ဦးက ငါ့ကို အတည်ယူပုံမရရင် ယူအောင် လုပ်ဖို့ လွယ်လွယ်လေး”
“ရှူး…ဟိုမှာ သတို့ သားနဲ့ သတို့ သမီးလာနေပြီဟ…”
သတို့ သားနဲ့ သတို့ သမီး အနားရောက်လာမှ ကျွန်မနားထဲကို သံရည်ပူတွေလောင်းချသလို ပူပူလောင်လောင် ကြားနေရတဲ့ စကားလုံးတွေ ရပ်တန့် သွားတော့တယ်…။ သတို့ သမီးနဲ့ သတို့ သားကို ချိုမြနေတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့နှုတ်ဆက်နေလိုက်ကြတာ…။ အော်… ဒီအသက်ဒီအရွယ်နဲ့ဒီလိုအကောက်အကွေ့ တွေ ကျွမ်းကျင်နေလိုက်တာ…။
“စကားဆက်ပါဦး… ဟိုက လူကုံထံ လုပ်ငန်းရှင်ကြီး… မိန်းမက နာမည်ကြီးမီးယပ်သားဖွားဆရာဝန်မကြီး… ရှင့်လို စတိုးဆိုင်မှာ အရောင်းစာရေးလုပ်နေရတဲ့ တယောက်ကို အတည်ယူအောင် ရှင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ”
“ဒါတွေထည့်မပြောပါနဲ့ … ရှင်ပြောတဲ့အဲဒီဆရာဝန်မကြီးမှာ ဒီလိုနုဖတ်နေတဲ့အသားအရေတွေ ရှိသလား… ဒီလိုတောင့်တင်းနေတဲ့ bodyရှိသလား… ဒီလိုချိုမြနေတဲ့အသံရှိသလား… လွယ်လွယ်လေး… ဦးမသိအောင် ကလေးတိတ်တိတ်လေးယူလိုက်မှာပေါ့… ပြီးတော့ ကလေးထိုးပြ ငိုလိုက်… တချက်ပါပဲဟာ… သူ့ သွေးကို သူပြစ်နိုင်မလား…”
“ဘုရား… ဘုရား… ရှင်ကလေးတယောက်ယူဖို့ စဉ်းစားတာ တမျိုးကြီးပါလား… တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သူငယ်ချင်းတော်တော်များများ စပွန်ဆာဖြစ်နေကြတော့ တို့ လေ အိမ်ထောင်ပြုဖို့ တောင် ကြောက်တယ်သိလား… ကိုက မချမ်းသာပါဘူး… ဒါပေမယ့် နာဖျားသည်ဖြစ်စေ… ကျန်းမာသည်ဖြစ်စေ တို့ နဲ့ အတူမရှိမှာစိုးတယ်… အမှန်ပြောရင် ငါက ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ ပဲ လက်ထပ်ချင်တာ… သစ္စာတရားဆိုတာ ဒီလောကကြီးမှာ တကယ်ရှိရင်ပေါ့… ”
“စိတ်ကူးတွေ မယဉ်စမ်းပါနဲ့ ဟာ… ရှင့်ကိုက ရှင့်ကို chanel အိတ်ဝယ်ပေးနိုင်ဖို့ နေနေသာသာ တယောက်လက် တယောက်တွဲပြီး ကားကျပ်ကျပ်အတူတိုးစီးရမယ့်ဘ၀… ဦးသူငယ်ချင်းအန်ကယ်ကျော်က ရှင့်ကို စည်းစိမ်ပုံပေးမယ်ပြောထားတာ… ဘာလို့ မိုက်မဲနေတာလဲ… တော်ကြာတခြားစပွန်ဆာနောက်ပါသွားမယ်”
“စဉ်းစားနေုတုန်းပဲ… ကို့ ကို သနားတယ်.. ချန်မထားရက်ဘူး”
“အေးစဉ်းစား…စဉ်းစား… နောက်မှ နောင်တမရနဲ့ … ဟယ်… message ရတယ်.. ဦးလာခေါ်မယ်တဲ့… တို့ သွားလိုက်တော့မယ်နော်… ရှင်တယောက်ထဲဖြစ်တယ်ဟုတ်”
“ရပါတယ်… သွားပါ… bye.. good night”
မင်္ဂလာပွဲက တည်ခင်းဧည့်ခံနေတဲ့ အစားအသောက်တွေက အရသာရှိမှာ သေချာပေမယ့် နဘေးက ကလေးမနှစ်ယောက်စကားတွေ နားထောင်ရင်း စားချင်သောက်ချင်စိတ်တွေ ပျောက်တဲ့အထိပါပဲ…။ ခေတ်ကြီးက အဲဒီလောက်ဆိုးဝါးနေပြီလား…။ ရင်ထဲမှာ တော်တော်လေးမကောင်း…။ ဒီလောကကြီးမှာ သစ္စာတရားဆိုတာ တကယ်ရှိမရှိမသေချာတဲ့ ကောင်မလေးပဲ ကျန်တော့တာမို့ပြုံးပြလိုက်မိတယ်…။ တကယ်လို့ များ ဒီကောင်မလေးကို စကားပြောခွင့်ရခဲ့ရင် ရင်ထဲမှာ အတော်သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်…။
“သမီးလေးက ဘယ်ပြန်ရမှာလဲ… မမနဲ့ လိုက်ခဲ့လေ…”
“ရှင်… ရပါတယ် မမရယ်… အားနာစရာ”
“အားမနာပါနဲ့ … မမလဲ တယောက်ထဲလာတာပဲ… သမီးစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် ခုနသမီးသိချင်တယ်ဆိုတဲ့ သစ္စာတရားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ တကယ့်အဖြစ်အပျက်လေး ၂ ခုပြောပြမယ်… ကဲလာ.. သတို့ သမီးနဲ့ သတို့ သားကို သွားနှုတ်ဆက်ရအောင်”
ကောင်မလေးက ကိုယ့်စကားနားထောင်ပြီး အံ့သြသွားတယ်…။ ပြီးတော့ သူ့ မျက်ဝန်းတွေထဲမှာ မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ …။ အဲဒီမျှော်လင့်ချက်မျက်ဝန်းတွေကို ယုံကြည်မှုမျက်ဝန်းတွေ အဖြစ် ကိုယ်ပြောင်းနိုင်ခဲ့ရင်ဖြင့် ဒီနေ့ ညက ကိုယ့်အတွက် အောင်မြင်တဲ့ည မင်္ဂလာရှိတဲ့ညပါပဲ…။
နာဖျားသည်ဖြစ်စေ… ကျန်းမာသည်ဖြစ်စေ… အေးအတူပူအမျှ အိမ်ထောင်ဖက်အနားမှာ အတူရှိတတ်တဲ့ သစ္စာရှိတဲ့ယောင်္ကျားကောင်းတွေ လောကမှာ အများကြီးပါသမီးရယ်…။ ပုံပြင်မဟုတ်တဲ့ သစ္စာရှိလွန်းတဲ့ မမသူငယ်ချင်း ၂ယောက်အကြောင်းပြောပြမယ်နားထောင်နော်…။
သူ့ နာမည်က Kelvin တဲ့…။ သူက စင်္ကာပူတရုတ်လူမျိုးတယောက်ပါ…။ သူသိပ်ချစ်တဲ့ နောင်သူ့ ဘ၀လက်တွဲဖော်ဖြစ်လာမယ့် ကောင်မလေးက သူနဲ့ တရုံးထဲလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ပေါ့…။ သူတို့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးက ရိုးရှင်းတယ်…။ အကွေ့ အကောက်မများဘူး…။ အနေအထိုင်အေးတဲ့ စိတ်တူကိုယ်တူ နှစ်ယောက် လက်ထပ်ဖြစ်ကြတယ်…။ သားလေးတယောက်၊ သမီးလေးတယောက်နဲ့ ချစ်စရာအိမ်ထောင်လေးတခု ဖြစ်လာတယ်…။ သူတို့ အိမ်ထောင်လေးက ပြီးပြည့်စုံပြီးသာယာနေခဲ့တယ်…။
မောင်တထမ်း မယ်တရွက် အတူ ရုန်းကန်းရင်း သားလေးသမီးလေးတွေကိုလဲ ပဲ့ပြင်ထိန်းကျောင်းရင်းပေါ့။ ဗြုန်းဆို မမျှော်လင့်ပဲ ကံကြမ္မာဆိုးက သူတို့ ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့မိသားစုလေးထဲကို ရောက်လာခဲ့တယ်…။ သူ့ အမျိုးသမီးလေး လေဖြတ်ပြီး အောက်ပိုင်းသေသွားခဲ့တယ်…။ ပထမဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာ ကိုမာဝင်ပြီး သတိတရားတွေပါ ချို့ ယွင်းခဲ့တယ်…။ နာမကျန်းတဲ့ ဒီလက်တွဲဖော်ကို Kelvin က ချန်ထားရစ်ပြီး ကျန်းမာတဲ့ ကောင်မလေးဆီသွားတယ်လို့ သမီးထင်သလားဟင်…။ Kelvinက နာမကျန်းတဲ့ သူ့ မိန်းမကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် စနစ်တကျ ပြုစုလာတာ ခုဆိုသူ့ မိန်းမက အတော်တိုးတက်လာပြီ…။ သားသမီးလေးတွေအတွက် မိန်းမကိုယ်စား အဖေတခါ အမေတလှည့်စောင့်ရှောက် စီးပွားရှာ… သူကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ကျွေးတဲ့ ဖခင်ကောင်း တယောက်ပါ…။ နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့ သူ့ မိန်းမစိုးရိမ်စိတ်ပူမှာစိုးလို့မိန်းခလေးသူငယ်ချင်းတောင် သိပ်မထားပဲ သူ့ အချိန်တွေကို သူ့ မိန်းမနဲ့ သူ့ ကလေးတွေအတွက်ပုံအပ်ပေးထားတဲ့ သစ္စာတရားနဲ့ ပြည့်စုံသူပါ…။ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ ဖခင်ကောင်းတယောက် အိမ်ထောင်ဦးစီးတယောက်ရဲ့ ထိန်းသိမ်းမှုအောက်မှာ မိသားစုလေးဟာ အရင်ကလို သာသာယာယာ ပြန်ဖြစ်လာခဲ့တယ်…။ သမီးရေ… အဲဒါဟာ ပုံပြင်မဟုတ်တဲ့ မမလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရဲ့ တကယ့်အဖြစ်အပျက်လေးပါ…။
နောက်တယောက်ကတော့ မမတို့ အာအိုင်တီက မမထက် နှစ်တန်းငယ်တဲ့ ကျော်ဇေယျဆိုတဲ့ မောင်လေးတယောက်ပါ…။ သူ့ ထက်ငယ်တဲ့ ညီမလေးလိုတမျိုး ချစ်သူလိုတသွယ် ချစ်ရတဲ့ ကောင်မလေးကို ဒီမှာတက္ကသိုလ်တက်ရင်း ဆုံခဲ့ကြတာပေါ့…။ သူ့ ထက်ငယ်ပေမယ့်လဲ တည်ငြိမ်အေးဆေးတဲ့ သူ့ ချစ်သူလေးကို သူအမြတ်တနိုးလက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်…။ တယောက်နဲ့ တယောက် နားလည်မှုအပြည့်အ၀ရှိတဲ့ ချစ်စရာ စုံတွဲလေးအဖြစ် သူငယ်ချင်းတွေ ကြားမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ စုံတွဲလေးပါ…။ အလုပ်အကိုင်လဲတော်… အိမ်ထောင်မှုအထိန်းအသိမ်းလဲကျွမ်းကျင်တဲ့ ဇနီးချောလေးကို ကျော်ဇေယျက တမြတ်တနိုးတန်ဖိုးထားချစ်ပါတယ်…။ သူတို့ မိသားစုလေး ပိုပြည့်စုံအောင် ကလေးလေးယူဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီး သားလေးကို ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားစဉ်က သူတို့ မိသားစုရဲ့ အနာဂတ်ပန်းချီလေးကို မှန်းဆပုံဖော် ဆေးရောင်တွေ အတူခြယ်လို့ ပေါ့…။ သားလေးအတွက် အလှဆုံးနာမည်လေးကို အတူရွေးကြ… သားလေးအတွက် အကျီင်္သေးသေးလေးတွေ အတူဝယ်ကြ… မိသားစုလေးထဲကို ရောက်လာမယ့် သားလေးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရင်း ဘ၀အမောတွေတောင်မေ့လို့ …။
အဲဒီလောက် ပျော်ရွှင်စိတ်ချမ်းမြေ့စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုလေးကိုလဲ ကြမ္မာအညှိးကြီးပုံများ… ကြားရသူတိုင်းကြေကွဲစရာပေ့ါ သမီးရယ်…။ သားလေးမွေးပြီးပြီးချင်းပဲ ဇနီးလေးမှာ သွေးတွေသွန်ရင်း ဘာမှ သတိမရပဲ ကိုမာရသွားခဲ့ပါတယ်…။ ကျော်ဇေယျမှာ ဇနီးသည်လေးကိုပြုစုရတာက တဘက် သားငယ်ငယ်လေးကို မိခင်နေရာက အစားထိုး စောင့်ရှောက်ရတာတဘက်နဲ့အပူများဗျာများရတဲ့ အချိန်ပေါ့…။ နောက်ပိုင်းမှာ ကိုမာက သက်သာခဲ့ပေမယ့်လဲ ပုံမှန်လို လှုပ်ရှားသွားလာလို့ မရတော့ပါဘူး…။ စိတ်တွေလေလွင့်ပြီး ရုပ်ရှင်ထဲကလို အရက်သောက် အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့အချိန်ဖြုန်းနေမယ်လို့သမီးထင်လားဟင်…။ ဇနီးသည်လေးကျန်းမာဖို့ အတွက် အဘက်ဘက်က ကြိုးစား ပြုစုတတ်လွန်းတဲ့ သစ္စာတရားကြီးမားသူတယောက်ပါ…။ နာတာရှည်ရောဂါမို့အသေအချာနှစ်ရှည်လများ စိတ်ရှည်လက်ရှည်ကုပေး စိတ်ဓါတ်အင်အားဖြည့်ဆည်းပေးတတ်သူမို့လေးစားစရာပါ…။ တချိန်ထဲမှာပဲ သားလေးကို မကျန်းမာတဲ့မိခင်ရဲ့ ကွက်လပ်တွေဖြည့်ပေးရင်း မိခင်ဖခင်၂ယောက်စာ ပြုစုထိန်းကျောင်းလာခဲ့တာ ခုဆိုသားလေးတောင် မူကြိုတက်နေပေါ့…။
မကျန်းမာတဲ့ ဇနီးသည်ကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဝတ်ဆင်ပေးပြီး စနေ၊တနင်္ဂနွေပိတ်ရက်တွေမှာ wheel chairလေးပေါ်တင် စိတ်အပန်းပြေမယ့်နေရာလေးတွေ လိုက်ပို့ ရင်း မိသားစု ဘ၀လေးကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြစ်အောင် ဖန်တီးပေးတာများ ကျန်းကျန်းမာမာမိန်းမတွေဘေးထား ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ ယောင်္ကျားတွေကို နားရွက်ဆွဲပြီး ပြချင်တဲ့အထိပါပဲ…။ သားလေးကိုလဲ ဘာသာတရားဘက်ပါ မလစ်ဟင်းရအောင် ဆုံးမသွန်သင်… ဘုန်းကြီးကျောင်း Sunday School ပို့ အပင်ပန်းခံ ပဲ့ပြင်ခဲ့တာကြောင့် သားလေးက ညအိပ်ရာဝင်ရင် မကျန်းမာတဲ့မေမေ့ကိုပါ ကန်တော့အိပ်တတ်တဲ့အထိ အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင် လိမ္မာလွန်းတဲ့ကလေးပါ…။ အဲဒီလောက်သဘောထားပြည့်ဝ ကြင်နာစောင့်ရှောက်တတ်တဲ့ ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ မေတ္တာတရားအောက်မှာ ဇနီးလေးက မကျန်းမာပေမယ့်လဲ အမြဲပျော်ရွှင်လန်းဆန်းနေတာတွေ့ ရတယ်…။ လူတိုင်းလက်ဖျားခါအောင် ဂရုစိုက်သိတတ်လွန်းတဲ့ သစ္စာရှိလွန်းတဲ့ ကျော်ဇေယျရဲ့ သူ့ ဇနီးပေါ်ထားတဲ့ မေတ္တာတရားကြောင့် သူ့ ဇနီးသည်လေး အမြန်ကျန်းမာပါစေလို့အပေါင်းအသင်းတွေ သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးက ၀ိုင်းမေတ္တာပို့ ပေးကြတယ်သမီးရဲ့…။
ကဲ… ဒီသစ္စာရှိလွန်းတဲ့ Kelvin နဲ့ ကျော်ဇေယျတို့ ဇာတ်လမ်းနားထောင်ရင်း သမီးချစ်သူကို လက်ထပ်ရဲတဲ့ သတ္တိတွေရှိလာပါစေလို့မမဆုတောင်းပေးပါတယ်…။ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ယွင်းလာတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သူများတရားပျက်တိုင်း ကိုယ်မပျက်စေနဲ့ သမီးရေ…။ အပင်ပန်းခံမရုန်းကန်ချင်လို့ဆင်းရဲဘေးက လွတ်အောင် ဖြတ်လမ်းလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ အယူမှားတွေရဲ့ အလွှမ်းမိုးမခံပါနဲ့ သမီးရယ်…။ တကယ်တော့ သူများမျက်ရည်ပေါက် ကြီးငယ်ကျမှ ကိုယ်ချမ်းသာရတဲ့အပြင် ဘာသာတရားအရလဲ ငါးပါးသီလမလုံတဲ့အလုပ်မို့ငရဲကျမှာ အမှန်ပါ…။
“ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ မမရယ်… ခုမှ သမီးရင်ထဲက အလုံးကြီးကျသွားတော့တယ်… သမီးလေ ကို့ ကိုပဲ လက်ထပ်မှာပါ… ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တနေ့ တနေ့ စပွန်ဆာဆိုတာတွေပဲ ကြားကြားနေရတော့ သမီးစိတ်ညစ်တယ်… လူငယ်ပီပီ သူများလှတာပတာတွေ့ ရင်လဲ ၀တ်ချင်ပြန်ရော… ဒါပေမယ့် သမီးကိုယ်ကျင့်သိက္ခာကို ငွေနဲ့ မရောင်းစားပါဘူး မမရယ်… ကို ကလဲ အဲဒါကို တန်ဖိုးထားပါတယ်… နောက်ပြီး ယောင်္ကျားတယောက်ကို သူများလက်ထဲက လုယူဖို့အပြစ်မဲ့တဲ့ ကလေးတယောက်ကို မိုက်မိုက်မဲမဲ ဒီလောကထဲခေါ်လာမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုး သမီးဘယ်တော့မှ မတွေးရဲပါဘူး… ခုလို သမီးရဲ့ မှုန်ဝါးနေတဲ့ အမြင်တွေကို ကြည်လင်အောင် လုပ်ပေးတာ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်”
“ရပါတယ် သမီးရယ်… ဒီမှာ မမဖုန်းနံပါတ်… သမီးတိုင်ပင်စရာရှိရင် အချိန်မရွေးခေါ်လိုက်နော်”
တကယ့်ကောင်းသောညပါ သမီးရယ်…။ အခွင့်အရေးများရခဲ့ရင် သမီးလို ကောင်မလေးတွေနဲ့ မမစကားတွေ အများကြီးပြောချင်ပါသေးတယ်…။ ဒီညဟာ တခြားညတွေထက် ကြယ်တွေစုံလို့ … ပြီးတော့ လမင်းကြီးလဲသာလို့ … အောင်မြင်တဲ့ညတညပါပဲ…။
(ဒီပို့ စ်မှ အကြောင်းအရာများကို သုံးခွင့်ပေးသော မောင်လေးကျော်ဇေယျကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်..)
Posted by တန်ခူး at 9:30 PM
သစ္စာမေတ္တာတရားတွေနဲ့သာ လောကကြီးကို လှပသာယာစေနိုင်မှာပါလေ...
စစ်မှန်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ သိပ်ကိုလှပတဲ့ သစ္စာတရားတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်အကြောင်းရာကို ဝေမျှပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရရင် ဇွန် ဒီခေတ်ယောက်ျားတွေအပေါ် ယုံကြည်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ အပျိုကြီးဖြစ်နေတာ ထင်ပါရဲ့လေ။ :D
Happy Blog Day, by the way! :)
သုတ္တန်များနှင့် မိတ်ဖွဲ့ခြင်း - လွန်ခဲ့သည့် ၃-နှစ်ခန့်က စင်္ကာပူနိုင်ငံ သတိပဋ္ဌာန်ရိပ်သာ လူငယ်တရားစခန်းပွဲ တခု၏ Sutta Study အစီအစဉ်အတွက် သုတ္တန် ၅-ပုဒ်ကို ရွေးထုတ် ပေးခဲ့ဖူးသည်။ သုတ္တန်ကောက်နှုတ...